Wasiiraddii Muse Biixi Xushay Hubaal Hadalkoodii Waxyeelo Buu Soo Kordhiyey. – somalilandtoday.com
Wasiiraddii Muse Biixi Xushay Hubaal Hadalkoodii Waxyeelo Buu Soo Kordhiyey.
Abdi wasiiraddii Muse Biixi soo xushay afsomaligii habaarbaa kaga dhacay, malaha kuwa I Agaasimayaal Bay ku wacnaayeen. Ammadda Somalidu Afsoomaaliga aad Bay yaqaaniin oo waxay u baahan yihiin wasiir balaaqad iyo saqaafad iyo Afsomali Yaqaana.
Dadku Faysal Ali Waraabe ayey fedhaab ka taagnaayeen hadalkiisa dhacdhaca iyo meel ka tuurka badnaa waxaa a bars dheeraysiiyey Wasiiraddii Muse Biixi internetka ka soo gurtay.
Waxaynu u Soo joognay waxyeeladii hadalkaa iyo qoraal ka a ahayd ee Dimaroo dhami ka qayliyeen wasiir Guri-barwaaqo welina dumarku ay wegerkii la daydeyayaan ee uu dhuumaalaysiga ku jiro weli.
Waxaa kaa kasii darani wasiir ka Ciyaaraha oo hadduu afkaba kala qaado meeshuu joogo
debedda looga yaacayo oon la dhegaysan karin xikmad yaraantiisa.
Waxaa a ugu daran ka Easiiral difaaca ah oo ku hanjabay hadduu Caarre u iman waayo inay Somaliland Argagi noqondoonto oo halkuu tegay ku soo dili doonto. Waxaa uu u markhaatifurau beentii weynayd ee Maamulka Cabdi weli Gaas ay lahaayeen Somaliland waa arga giwaar kan yaa halkuu ka yimi inoogu celiya.
Waxaa ugu daran kan gobolkii loo Afsoomaaliga doonan jiray ka soo jeeda ee markuu afka kala qaadaa meel ka dhac samaynaya ee hadana warkii oo duu an dafiraya, sideebaa loo aamini doona ninka hadal ka dhacay qiran waayey ma wax kaluu qirandoonaa waa walaac weyn oo ummadda ku soo kordhay wasiirada Muse Soo Xushay.
Wasiirka arimaha debedda hadalkiisa, siyaasadiisa khaarajiga iyo Barnaamijkuuso wuxuu ku suganyey KHALIDUUR maalin ba dhinac buu u dhaqaaq boodayaa dabeecadda bakayluhuu leeyey.
Wasiirka bilaha isagu BIYO a kama sheekeeyo ee wuxuu ka sheekeeyaa BIYO la’aan iyo dagaal uu gobolkii sii ka dhex wado, wasiirkii ina Bashe ee Wadani galay ayaa aad u heer sareeyey.
Isbedelku xawliga ku socda ee mandaqadda Geeska Afrika wasiiraddii la JAAN qaadi lahaa maaha.
Madaxweyne Muse Biixi aad ha ugu fiirasado (quality) iyo dad soo jiidashada wasiiradiisa. Aad Bay ugu hooseeyaan arintaa oo khusaysaa qiimaynta dawladnimo.